के छ सन्नी लियोनीको बायोपिकमा ? (प्रोमो) « Ramailo छ
के छ सन्नी लियोनीको बायोपिकमा ? (प्रोमो)
पुर्व पोर्नस्टार तथा बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीको जीवनीमा निर्माण भएको वेब सिरिज ‘करनजित कौर – द अनटोल्ड स्टोरी अफ सन्नी लियोनी’को प्रोमो रिलिज भएको छ ।
बायोपिक सन्नी आफैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । प्रोमोमा उनको बलिउड करिअर, बाल्यकाल, पारिवारिक स्थिति, पोर्नस्टारताकाका दृश्यहरु हाइलाइट गरिएको छ । सन्नीको बाल्यकालको रोल रसा सौजनीले निर्वाह गरेकी छन् ।
आदित्य दत्त निर्देशित सिरिजमा सन्नी कामुक अवतारमा प्रस्तुत हुने छिन् । यो वेब सिरिज १६ जुलाईबाट ‘जी फाइभ’ एपमा रिलिज गरिनेछ ।
पछिल्लो समय बलिउडमा बायोपिकको लहर चलेको छ । अन्य क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्वहरुको जीवनीमा बलिउड फिल्म बने पनि बलिउडकर्मीको जीवनीमा खासै निर्माण भएका छैनन् । प्रदर्शनरत ‘सन्जु’ बलिउडकर्मीको जीवनीमा बनेको सम्भवत: पहिलो फिल्म हुनु पर्छ